Antiviruses – Category – Android – Vessoft
Antiviruses – Android
Antiviruses The antivirus lagu kalsoonaan karo badbaadinta ka dhanka ah noocyada kala duwan ee files xaasidnimo ah, tiirka ammaan ee internet-ka iyo ilaalinta xogta qarsoodi ah.
العربية, English, Українська, Français... Avast 5.8.1
Antiviruses The-adda oo dhammeystiran si ay u ilaaliyaan nidaamka ka dhanka ah fayrasyada iyo furin. Sidoo kale waxa ay taageertaa qaabab kala duwan oo qalliin si ay u aqoonsadaan dhibaatooyinka nidaamka iyo siiyaan ilaalinta hanjabaadaha shabakadda.
العربية, English, Українська, Français... AVG 5.2.0.1
Antiviruses The software anti-virus awood badan si ay u ilaaliyaan qalabka ka dhanka ah fayraska oo kala duwan. Software ka kooban yahay hawlaha iyo modules badan oo kala duwan si loo wanaajiyo hawlgalka ka mid ah qalabka.
العربية, English, Українська, Français... CM Security 3.1.3.1048
Antiviruses The-adda oo dhammeystiran si ay u ilaaliyaan qalabka ka dhanka ah fayraska oo kala duwan. Software wuxuu isticmaalaa ugu algorithms casriga ah in la ogaado oo meesha laga saaro halista ku.
العربية, English, Українська, Français... Avira AntiVir 4.5
Antiviruses The-adda oo lacag la'aan ah si ay u ilaaliyaan nidaamka qalab ah fayrasyada iyo hanjabaado kale. Sidoo kale haddii loo baahdo ay taageerto qufulka qalab fog iyo wicitaanada soo socda ama SMS.
English, Español, Deutsch, 中文... 360 Security 3.9.8.5308
Antiviruses Ayna System software The si ay u ilaaliyaan qalab ka gees ah fayrusyada iyo modules xaasidnimo, nadiif ah nidaamka, maareeyaan codsiyada iyo badbaadin tamarta batteriga.
العربية, English, Українська, Français... Dr.Web 10.1.2
Antiviruses The software antivirus caan ah si loo xaqiijiyo badbaadinta dadka qalab hanjabaadaha kala duwan. Software wuxuu ka ilaaliyaa habka ka dhanka ah content network khatar ah oo fayrusyada kale oo noocyo kala duwan.
العربية, English, Українська, Français... Eeg software more
Qaar kale waxay
Popcorn Time 2.8
Google Chrome 54.0.2840.85
Eeg software more